Aingam-panahy ho an'i Dadah Rabel - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nangonin'i Chico il y a 17 jours
VELOMA DADAH A !
Tohina ny fo,
Mangidy ny ao am-bava,
Marary ny ao an-doha,
Tsy haiko ny milaza.
Mpihira tiako indrindra
Ianao re ry Dadah !
Gitara sy fanahy !
Tsy hitanisa aho,
Tsy vita hotantaraina,
Ny soa navelanao..
Voarakitra ao an-tsaina !
"Raha mila fanampiana...
...Tsy mety ny atao"
Ianao no niangaliana
Ilay vazo tsy ho lao !
Tsy hita fa izay...
Indrisy ry ankaso...
Veloma any amin'ny RAY !
Mandria am-piadanana zokibe Dadah a !
(Mpihira tiako indrindra)
MANDRIA AM-PIADANANA R’ILAY MPANAKANTO
Dadah a! Dia iny ianao no lasa…
Fa misy fanasana any an-toerankafa
izahay nihanahana nilaozanao tampoka
Nangina ilay tanana, nilaozanao ilay vakoka !
Ianao tsy lasa lavitra, fa ao ambadika ao
Ankoatra no anaran'ilay fonenana vaovao
Mba mila revy koa angamba ry zareo
Ianareo efatra any zao, misolo tena ny Mahaleo !
Ny vitanao tety, tsy hainay tantaraina
Nanentana ny fo, fanahiko sy saina
Nampionona ireo kivy, nandrandrana fihavanana
“Manahy aho”, ilay hira tiako, mitandro finamanana!.
Mirary soa indrindra, dia aza manahy,
Am-ponay mandrakizay izany hoe Dadah
Izahay tsy hanadino fa hitondra am-bavaka
Fa nahavita be ianao, mendrika sy miavaka
Mijanona ao am-ponay ireo hiranao milanto
Mandria am-piadanana r’ilay mpanakanto !
androany 4 Novambra 2019 amin'ny 7 ora sy 2minitra
Ry fasana ô, mba aoka izay e!
maka tsy miera foana!
Ny ranomaso latsaka aza,
mbola manorika ny tava!
Jereo 'zahay vonton-tsento,
mifokofoko foana hatreto,
Fa tsy niherina ny volana,
dia indro ianao nisolantsolana,
nifaoka tampotampoka eo
'reo "railovy" manga feo!
Tsy afa-nionona akory
dia avy ianao nampahory,
mbola niandry fatratra azy!
Vatana tsy afa-manoatra,
no lavonao ho any ankoatra,
f'ireo kalo am-peo kanto,
hitoetra hatrany, hanakoako!
Sisa am-po mangaiahy,
mirary anareo roalahy,
handry indrindra am-piadanana,
fa izahay hanohy ny lalana!
Ny Namana sy ny Mpankafy!
Ny Tia Nosy
Hoy i Dadah
Sendra tsy tana
No nanditsoka ahy
Nefa tsy ahiko norarana
Fa nanivatsiva fo sy fanahy
Sendra harivariva mampirongatra tsiahy
Eny , tsy hifoha
Fa tsy tonga hampahory
Ireo akon'ny taloha
Fa mbola mahery
Ka mamoha ireo fery
Efa dify efa tsy tsaroana
Fa ny omaly e
Tsy mamela hipetraka
Toa tsy voafehy
Toa tanana efa mahamay
Ka mandoro ny tarehy
Tsy mamela ahy ho sambatra
Fa te hitosaka
No injay indray mirotsaka
Fa ny lasa nitondrana
Ny mafy sy mangidy
No iverina mazana
Mamoha ireo ratra efa nihidy
Ka inia-nisomparana izay anjara fifaliana
Ka ny hasambarana
Nisintaka zary nangina
Fa ny omaly
Ka mahatonga ...
Ranomaso iray !!!
Ranomaso iray : Aingam-panahy ho an'i Dadah Rabel - il y a 17 jours
Tsiaro ireo nodimandry : Zava-mahagaga ny herim-pahatsiarovana ! - il y a 24 jours